About Us - J & E Import and Export Co., Ltd.
Isango 1 Safety
2 Phet (Isihlahla / Tower / Scratch)
3 Pet Nokuzilungisa
4 Pet Yokuhlanza Imikhiqizo
5 Pet Water Idivaysi ekhipha
8 sokuheha Isaphulelo
Ninbo J & E kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle Co., Ltd. Ingabe esungulwe ngo-2010 inkampani yethu itholakala e Ningbo, imikhiqizo yethu eyinhloko afakiwe isilwane ukuphepha esangweni, yezinyoni isilwane, ikati kanye ikati esihlahleni efektri yethu siqu. Manje thina sibe izisebenzi ezingaphezu kuka-200 futhi 5000 square metres endaweni. Sifinyelela ukukhiqizwa ikhono 30pcs 40ft iziqukathi ngenyanga. On ngenye indlela, nathi senza ukuhweba zebhizinisi zonke izinhlobo neminye imikhiqizo isilwane. Ahlanganisiwe collar isilwane & ngezintambo, emabhulashini isilwane, esebenza ngogesi isilwane, ikati amathoyizi, ezincane isilwane izesekeli.
Quality Good, benze inkonzo enhle, intengo ezinhle nekghono eziphakeme zingezezimbuzi ibhizinisi lethu isimiso. Base ngalolo, imikhiqizo yethu ngabe athengiswe ukuze North American, European, naseJapane Ngaphezu kwalokho, siye sajabulela nezinye idumela elihle kulezi nokumaketha. Zokuthuthukisa ibhizinisi namakhasimende ethu amadala namasha, sesisungule siqu nokuhlonza design mnyango lethu izinto ezintsha isilwane nsuku zonke.
Kwemboni yethu yasungulwa ngo-1997, onguchwepheshe ukukhiqizwa izimpahla isilwane, has eminingi yokuhlangenwe nakho ekhiqizako, izinga lomkhiqizo 20 ngokusebenzisa IS0 14001 / SGS / EN1930-2011 amazinga. Imboni itholakala Ninghai, a esiFundeni Ningbo, Kuyinto 45 amaminithi kude Ningbo Airport. , 50 km kusuka Ningbo Isiteshi sesitimela. Imikhiqizo yethu eyinhloko afakiwe isilwane ukuphepha esangweni, yezinyoni isilwane, ikati kanye ikati esihlahleni, yethu 5000 square metres ifektri sinesikhundla nyangazonke 30-50pcs 40ft iziqukathi, kukhona inani abasebenzi 200 ezimbonini yethu. Sine ucwaninga ethu futhi umnyango asathuthuka, bese usithumela iphrojekthi yakho, sizokunikeza isampula obuhle e 7-15days.
Inhloso yethu ukuba umphakeli lomhlaba kumakhasimende ekilasini Wold futhi idlule expections ikhasimende lethu izinga, ukulethwa kanye nezindleko ngokusebenzisa intuthuko eqhubekayo futhi ikhasimende ukuxhumana
Bhalisa Bethu Newsletter
RM1003, chuangyi isakhiwo sheji, 508 TaiAn Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo, China, 315100
Interzoo - ukujabulisa ukuhweba imikhiqizo fo ...
© Copyright - 2010-2021 : All Rights Reserved. Hot Products - Ibalazwe - AMP Ucingo
Pet Nokuzilungisa , Master Grooming Tools, Pet Cleaning & Grooming Imikhiqizo , Pet Nokuzilungisa Glove , Pet Nokuzilungisa Funisisa , Inja Grooming ,